Akhriso Warqadii ay UK u kala dirtay Madaxweynaha, Xisbiyada iyo Golayaasha Qaranka |
Akhriso Warqadii ay UK u kala dirtay Madaxweynaha, Xisbiyada iyo Golayaasha Qaranka
Guddida hagista dimuqraadiyadaynta Somaliland oo ay maamulaan gole ka kooban bulshada caalamka ee gacanta ka geysata nidaamka doorasho ee Somaliland ayaa 24ki Bishan waxa ay soo saareen qoraal ay horudhac uga dhigeen booqashadii ay shalay ku yimaaddeen Somaliland ee la xidhiidhay qabsoomidda doorashooyinka.
Haddaba warqaddan ergadu iska soo horreysiisay oo ay ku saxeexan yihiin Neil Wigan oo ah danjiraha Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya iyo Phil Evans oo ah madaxa haayadda gargaarka dibadda u qaabilsan Ingiriiska ee DFID waxa si adag loogula hadlay dhinacyada Somaliland oo loogu baaqay in ay raacaan muddaynta Komishanka doorashooyinka, waxaana lagaga digay in muddo kordhinta lagu wado in Guurtidu samaysaa ay noqoto mid siyaasadaysan, oo aan ku salaysnayn muddada sannadka ah ee Komishanku qabsaday.
Warqaddan waxa aanu sidoo kale ku codsanaynaa kulan aanu maalinta sabtida ee 25kaApril la yeelanno xafiiska madaxtooyada, guddoomiyeyaasha xisbiyada siyaasadda, Komishanka doorashooyinka iyo Guurtida. Ergada Diblumaasiyadeed ee naga imanaysana waxaa hoggaamin doona, Ingiriiska, oo hadda ah guddoomiyaha wadaagga ah ee guddida hagista dimuqraadiyadeynta (DSC). Haddaba, inta aannan booqashadaas aanu soo jeedinnay idinku iman, aanu idinla wadaagno aragtida bulshada caalamka ee ku aaddan dhamaystirka wareegga doorashada, si loo hago doorashooyinka lammaan ee Baarlamanka iyo Madaxweynaha, oo hadda loo muddeeyey 1da Juun 2016ka.
Madaxweynaha, saddexda xisbi siyaasadeed iyo labada aqal ee baarlamanka waxa ay ammaan ku mudan yihiin, sida ay illaa hadda siyaasadaynta uga ilaaliyeen waqtiga loo cayimay doorashooyinka – Oo la soo jeediyey in ay noqdaan 1daJune 2016ka- iyo sidoo kale, sida ay Komishanka doorashooyinka qaranka ugu garab istaageen gudashada hawshooda dastuuriga ah, ee ah in ay soo gudbiyaan jadwal doorasho oo si adag ugu salaysan hawlqabadka farsamo.
Bulshada Caalamku waxa ay ka niyad-jabsantahay in waqtiga la soo jeediyey in doorashooyinku qabsoomaan uu noqon waayey dhammaadka sannadkan 2015ka, taas oo aanu u aragno in ay suurtogeli lahayd farsamo ahaan, haddii ay xukuumaddu dib-u-eegis ku samayn lahayd qodobbada 7 (2) ama 26 (2) ee xeerka diiwaangelitna codbixiyeyaasha, Xeer Lr. 37/2007, iyo dib u dhaca lixda bilood ah ee u dhexeeya dhamaystirka liiska codbixiyeyaasha iyo maalinta doorashooyinka.
Si kastaba-ha-ahaato ee bulshada Caalamku, waxa ay Dimuqraadiyadda Somaliland ugu baaqaysaa in ay si adag u raacdo tallaabooyinka xiga ee geeddi-socodka doorashada, iyaga oo dhowraya Jadwalka uu soo saaray Komishanka doorashooyinku.
Bulshada Caalamku, kordhin intaas ka badan oo siyaasadi dabada ka riixayso waxa ay u arki doontaa wax aan-la-aqbali karin, waxa aanay cawaaqib xun ku yeelan doonta xidhiidhka adag ee siyaasadeed iyo horumarineed ee aanu la leenahay Somaliland.
Bulshada Caalamku waxa ay diyaar u tahay in ay taageerto geeddi-socodka doorasho ee Somaliland farsamo ahaan iyo diblumaasiyad ahaanba.